wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » March » 17
Dadweynaha Dalka Canada ayaa waxaa ay ka cabanayaan dhibaato ay ku qabaan Nambarro wata furaha Soomaaliya ee 252,kaas oo dadka lagu dhoco. Taleefannada loo yaqaanno Caaqilka am Smart-ga dadka wata ayaa sheegaya in Nambarrada soo wacaya ay u dhacayaan Internet Wareless-ka...
Guddiga Joogtadda Xubnaha Aqalka Sare ee dalka oo goor dhaw Warbaahinta la hadlay, ayaa shaaciyay sida ay kaga xun yihiin khilaafaadka ka dhex taagan Gudoonka Golaha Shacabka. Xubnaha Guddiga joogtada ayaa sheegay inay iska soo dhex xuleen Guddi Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare,...
Xildhibaanada Mucaaradka ku ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo goor dhaw Saxaafadda Shirjaraa’id u qabtay, ayaa waxa ay ka hadleen Mooshinkii ay ka keeneen Gudoomiye Jawaari. Xildhibaanada oo siyaabo kala duwan uga hadlay, arrinta Jawaari,...
Kooxo hubaysan ayaa Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir waxa ay ku dileen Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale xilli uu ka soo baxay gurigiisa. Nabadoonka ayaa lagu dilay Xaafadda Taleex ee Degmada Hodan, waxaana toogtay dabley hubaysan oo Bistooladol watay, kuwaasi oo ka baxsaday...
Madaxweyne Farmaajo Oo Go’ aan ka soo saaray Khilaafka Barlamanka iyo Raisulawasaraah
Xogta ayaa sheegeysa in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu ka codsaday Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya inaan Shacabka lagala hadlin Warbaahinta si loo qaboojiyo xiisada siyaasadeed ee dalka uu ku jiro. Madaxweyne...
Wasaarada Aminga Iyo Taliska Booliska Oo sheegayin aysan jirin Ciidan la wareegay Xaruunta Baarlamanka
Wasaaradda amniga iyo Taliska Ciidanka Booliska Somaliyed, ayaa beeniyay hadalkii Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya ka soo baxay, kaasi oo ahaa in ciidan Militari ay la wareegeen xarunta Golah Shacabka Somaliya. Shirjaraai’d oo ay si wadajir ah u qabteen Wasiiru dowlaha Wasaarada...
War kasoo baxay Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriika iyo Mareykanka ayay kaga hadleen Xaaladda Siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay Soomaaliya. Madaxda Dowladda waxa ay usoo jeediyeen in ay dhawraan Shuruucda dalka u taalla,...